स्वास्थ्य खबरपत्रिका :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
मंगलबार, असार १४, २०७९Tue, Jun 28, 2022
भ्यान्टा कत्तिको खानुहुन्छ? भ्यान्टामा पर्याप्त मात्रामा आइरहन पाइन्छ। शरीरमा आइरन बढाउन मात्र होइन भ्यान्टाले मानब शरिरमा मुटु रोग लगाउने खराब कोलेस्टेरोल घटाउन समेत मद्धत गर्छ। आइतबार, जेठ २२, २०७९
गर्मीको साथी पुदिना र मेथी पुदिनाको पातको महत्व विदेशमा धेरै छ। यसले स्वास्थ्य राम्रो गर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर धेरैले महत्व दिएका छैनन्। तर, औषधिका रूपमा त्यही पुदिना बजारमा आउँदा जति पनि पैसा तिर्छौं। बिहीबार, वैशाख १५, २०७९
किन चाहिन्छ ‘भिटामिन बी’? के खानेकुरामा पाइन्छ? भिटामिन बी कम्प्लेक्स पानीमा घुलनशील भिटामिन हो। भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी भएमा स्मरण शक्ति कमजोर हुनुका साथै थकान महसूस हुने र डिप्रेशन पनि हुनसक्छ। शनिबार, वैशाख १०, २०७९
यी हुन् बच्चाका लागि क्याल्सियमयुक्त खाद्यपदार्थ वयस्कको तुलनामा उनीहरुको शरीरको आवश्यकता पनि धेरै नै हुन्छ। उनीहरुले बढी पोषक तत्व सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ। उचाई, तौल र उमेरको हिसाबले सन्तुलित आहारा सेवन गर्नुपर्छ। यस्तोमा बच्चाको विकासका लागि क्याल्सियमको सेवन निकै आवश्यक हुन्छ। मंगलबार, चैत २९, २०७८
फोक्सो स्वस्थ राख्न के खाने? लसुनमा एलिसिन नामक तत्व पाइन्छ, जसले इन्फेक्सनविरुद्ध लड्ने शरीरको क्षमतालाई बढाउने गर्छ। लसुनले फोक्सोलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। सोमबार, चैत २१, २०७८
आँखाको ‘डार्क सर्कल’ हुनेले के खाने? बढी काम गर्ने, तनाव लिने, पर्याप्त नसुत्नेलगायत कारणले आँखावरिपरि ‘डार्क सर्कल’ देखापर्ने गर्छ। यसले मानिसको समग्र सुन्दरतामै ह्रास ल्याउँछ। डार्क सर्कल हटाउन यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुपर्छः शुक्रबार, चैत १८, २०७८
घरमै पाइने यी जडिबुटीले सहजै घटाउन सकिन्छ मोटोपन आफ्नो शरीरको संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल राख्दै यी जडिबुटीहरु उचित मात्रामा मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। भान्सामा सहजै पाइने वनस्पतिहरुमा केन्द्रित भएर शरीरको मोटोपन नियन्त्रणका विषयमा यहाँ छलफल गरिएको छ। बिहीबार, साउन ७, २०७८
काँक्रोका १५ रोचक तथ्य र स्वास्थ्यमा फाइदा सूर्यको किरणद्वारा उत्पन्न हुने समस्याका लागि काँक्रो लाभदायी हुन्छ । यसको बोक्रामा नै म्याग्नेसियम, पोटासियम र सिलिकनजस्ता तत्व हुन्छन्। यहीकारण यसलाई स्पा उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। बिहीबार, असार १७, २०७८
ब्राउन राइसका फाइदा ब्राउन राइस अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड, प्रोटिन, मिनरल्स, भिटामिन्स र स्टार्चको गुणले भरिपूर्ण हुन्छ। बडी विल्डिङ बनाउनेदेखि मधुमेह र मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीले रोगबाट बच्न ब्राउन राइसको सेवन गर्छन्। शनिबार, फागुन २२, २०७७
दालचिनीको अनेकौ फाइदा दालचिनी एक मात्र नभई धेरै प्रकारको हुन्छ र यो कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ। सीलोन दालचिनी (म्याक्सिकन दालचिनी), कोरंटजे दालचिनी, क्यासिया दालचिनी र साइगान दालचिनी। आइतबार, फागुन १६, २०७७
औषधीय गुणले भरिपूर्ण करेला करेलामा फोस्फोरस पर्याप्त मात्रा पाइन्छ। जसले कफ, कब्जियत र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याबाट बचाउँछ। यदि तपाईंलाई भोक लाग्दैन भने करेलाको सेवन गर्नुहोस्। यसले भोक नलाग्ने समस्याबाट पनि छुटकारा दिन्छ। बुधबार, फागुन १२, २०७७
स्वास्थ्यवर्धक सिलाम सिलामलाई मुख्यतः अचार र तेलहनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, यसका धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ। सिलामको फलमात्र होइन, पात पनि स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त राम्रो मानिएको छ। मंगलबार, फागुन ११, २०७७
पानी पालकका फाइदा सागको रुपमा भुटेर या आलुमा मिसाएर तरकारी बनाएर पनि हामी पानी पालक नियमित खाइ नै रहेका हुन्छौं। नियमित रुपमा खान सकेमा पानी पालकले स्वस्थ्यका लागि कयौं फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। आइतबार, माघ ११, २०७७
घरमै बनाउनूस् तिहारका यी मिठाइ, यस्तो छ बनाउने तरिका शनिबार, कात्तिक २९, २०७७
कस्तो मासु स्वस्थकर? शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७
कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक स्वस्थ र सन्तुलित आहार सोमबार, कात्तिक ३, २०७७
हेपिएको खाना सिस्नोको शक्ति शुक्रबार, असोज ९, २०७७
घिरौलाका १० फाइदा बिहीबार, असोज ८, २०७७
फलको राजा डुरियन : स्वास्थ्यका लागि फाइदैफाइदा शनिबार, असोज ३, २०७७
स्वास्थ्यवर्द्धक फल रम्बुटान : के-के छन् फाइदा? मंगलबार, भदौ ३०, २०७७
अकबरे खुर्सानीका १५ गुण शनिबार, साउन ३१, २०७७
कहाँ हरायो पुरानो खाजा पुवा? यस्तो छ, पुवामा लुकेको वैज्ञानिकता आइतबार, साउन २५, २०७७
स्वास्थ्यलाई अचुक फाइदा पुर्‍याउने जडिबुटीको पकवान शास्त्र शनिबार, साउन २४, २०७७
बहुउपयोगी आँप : यसरी बनाउन सकिन्छ अनेक परिकार मंगलबार, साउन २०, २०७७
स्वास्थ्यवर्द्धक कर्कलोबाट बन्छन्, यस्ता अनगिन्ती परिकार मंगलबार, साउन ६, २०७७
तितेपातीभित्र लुकेको तितो सत्य बुधबार, असार २४, २०७७
कोरोनाका सन्दर्भमा बेसारको महत्व र वैज्ञानिक आधार मंगलबार, असार ९, २०७७
कोभिड महामारी र नेपाली खाना शुक्रबार, असार ५, २०७७
पकवान शास्त्र : कला र विज्ञानको मिश्रण आइतबार, जेठ २५, २०७७
किन जरुरी छ, भोजनमा क्यालोरी क्याल्कुलेसन? शनिबार, वैशाख १३, २०७७
बेलायतसँग नर्स मात्र नभइ स्वास्थ्य जनशक्ति भनेर सम्झौता गरिँदैमंगलबार, असार ७, २०७९
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले १४ घण्टा पहिले
स्वास्थ्य बीमा र स्थानीय तहको भूमिका बुधबार, जेठ १८, २०७९